Maxaa baajiyay kulankii baarlamaanka ee Jawaari ka hadli lahaa? – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Maxaa baajiyay kulankii baarlamaanka ee Jawaari ka hadli lahaa?
STN News April 11, 2018 Leave a comment
Waxaa baaqday kulan aad looga dhursugayay oo baarlamaanka faderaalka Soomaaliya uu ku yeelan lahaa maanta magaalada Muqdisho, kaas oo la filayay in guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu ku soo bandhigo istiqaaladiisa, kana jeediyo khudbad, sidii uu shalay ballan qaaday isaga oo garab taagan madaxweynaha.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid ka hadashay sababta uu kulankaasi u baaqday, waxaase la filayaa in bari oo Khamiis ah uu qabsoomo.
Guddoomiye kuxigeenka koobaad Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudeey ayaa xalay soo diray fariin uu xildhibaannada ku wargalinayo in uu kulankii loo ballan sanaa Arbacada baaqday, balse xubnihii taageersanaa Jawaari ayaa soo diray fariin kale oo ay ku sheegayaan in kulankaasi uu u qabsoomi doono sidii loo ballan sanaa, haddana saaka ayay mid kale soo direen iyaga oo sheegay in kulankaasi baaqday.
Dad badan Soomaaliyeed ayaa sugi la’aa khudbadda uu Jawaari u jeedin doono xildhibaanada.
Duhurnimadii Talaadada ayey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo guddoomiyaha Baaralamaanka federaalka ee xilka ka sii degaya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, wadajir shir jaraa’id ugu qabteen Muqdisho.
Jawaari oo hadalka ku horreeyey ayaa ku celiyey in Arbacada uu istiqaaladiisa Baarlamaanka hor gayn doono. Weli kama uusan hadlin sababta uu isu casilay.
“Waxaan ku celinayaa in amaanadii la ii dhiibay aan u celin doono golaha, wixii dheeraad ahna waxaan ku soo qaadi doonaa hadalkayga berrito” ayuu yiri.
Madaxweyne Farmaajo ayaa isna ka codsaday Jawaari inuu sii wado talo bixintiisa xagga qabyo tirka dastuurka. Baarlamaankana wuxuu ka codsaday inuu korjoogtayn joogto ah ku sameeyo xukuumadda.
Labada mas’uul kama aysan hadlin wax dhaafsiisan is casilaadda Jawaari ee la filayo inuu berri oo Khamiis ah ku dhawaaqo, inkastoo aan la ogayn waxa ay ka wada hadleen ka hor shirka jar’aaid.
Isniintii ayuu Guddoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, si lama filanaan ah ugu dhawaaqay inuu is casilayo
Go’aankaas ayaa soo afjaray muran siyaasaded oo muddo dhowr todobaad ah ragaadiyey hawlihii baarlamaanka iyo xukuumadda.
Murankaas ayaa keenay in xildhibaannada baarlamaanka ay aad u kala qaybsamaan, ayadoo qolo kaste cuskanayso qodobbo dastuurka iyo xeerhoosaadka baarlmaanka ku jira, ayay dhinaca kale ku eedeyeen inay shuruucda ku xadgudbayaan.
Jawaari qudhiisa ayaa dhowr goor eedeymo u jeediyey xukuumadda iyo madaxweynaha oo aan ka hadlin khilaafka intii uu jiitamayey.
← Faah faahin ka soo baxeysa dagaal culus oo ka soconaya qeybo ka mid ah degmada Wadajir
Cayaartooy u dhalatay Cameroon oo ka goostay xulkooda xilli ay joogeen Australia →